သတင်း - ကလေးဆီလီကွန်ဇွန်းများသည် ကြည့်ကောင်းပြီး ဘေးကင်းသည် ၊ သင်မည်သို့ရွေးချယ်သနည်း။
နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ စာရင်းဇယားများအရ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ မိခင်နှင့် မွေးကင်းစ ကလေးငယ်များ၏ စားသုံးမှုအဆင့်သည် 2015 ခုနှစ်မတိုင်မီ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် 13% တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းက စျေးကွက်အတွင်း စားသုံးသူများ၏ ဝယ်လိုအားမှာ မိခင်နှင့်ကလေး ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြရန် လုံလောက်ပါသည်။ တိုးချဲ့နေဆဲဖြစ်သည်။ဆီလီကွန် ကလေးပန်းကန်ခွက်ယောက်များ သည် ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ကလေးအစားအစာများဖြင့် စတင်ကာ မိခင်များသည် ကလေးများအတွက် နှစ်သက်သော နို့တိုက်ကျွေးရေး ပန်းကန်ခွက်ယောက်အစုံကို ဝယ်ယူရန် စိတ်လှုပ်ရှားနေပါသည်။ဆီလီကွန်ဇွန်းများသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမျိုးအစားဖြစ်သောကြောင့် ကလေးငယ်များအတွက် ပထမဆုံးပန်းကန်ခွက်ယောက်မှာ ဇွန်းများဖြစ်ရပါမည်။ဒါဆို ကလေးအတွက် ဖြည့်စွက်စာလို စိတ်ခံစားချက်ရှိဖို့၊ လက်တွေ့ကျပြီး ဘေးကင်းစေဖို့ ဇွန်းကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
စျေးကွက်တွင် ဇွန်းအမျိုးအစားများစွာရှိပြီး လက်တွေ့ကျသော ကလေးဇွန်းကို ရွေးချယ်ခြင်းသည်လည်း မိခင်များကို စိတ်အေးချမ်းစေပါသည်။လက်ရှိတွင်၊ ပစ္စည်းအားဖြင့်၊ စျေးကွက်တွင်မည်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများသည်ပလပ်စတစ်၊ သစ်သား၊ သံမဏိ၊ ဆီလီကွန်စသည်ဖြင့်တွေ့ရှိရသည်။ပစ္စည်းတစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် အားသာချက်များ ရှိသော်လည်း မွေးကင်းစကလေးငယ်များနှင့် ကလေးများအား ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် ဘေးကင်းပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သည့်အတွက် ဆီလီကာဂျယ်ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားဆဲဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းကိုရွေးချယ်ရာတွင် မည်သည့်ပြဿနာများကို သတိထားသင့်သနည်း။
1. ပစ္စည်းနှင့် ဘေးကင်းရေးသည် အရေးကြီးဆုံး ပြဿနာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် ဆီလီကွန် စားပွဲတင်ဇွန်းကို ဝယ်ယူသည့်အခါ ၎င်း၏ ပစ္စည်းသည် ပုံမှန်စျေးကြီးသော ပစ္စည်းဟုတ်မဟုတ် သိရှိရန် ကြိုးစားပါ။လက်ရှိတွင် TPE၊ PP၊ PVC အစရှိသည့် စီလီကွန်ပစ္စည်းများကို အတုခိုးသည့် သာမိုပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများ အများအပြားရှိနေပြီဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်းဆိုင်များတွင် ရောင်းချသည့် ဆီလီကွန်ကလေးသုံးပစ္စည်းများသည် အခြားပစ္စည်းများကို ဇွန်းဖြင့်ရောင်းချသည့်ပုံစံဖြင့် ရောင်းချနေကြသော်လည်း သဘာဝ၊ ဆီလီကွန်ပစ္စည်းသည် ဆီလီကွန်အဖြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ၎င်းကိုခွဲခြားသိမြင်နေသမျှကာလပတ်လုံး ပြဿနာရှိမည်မဟုတ်ပါ။
2. ပုံပန်းသဏ္ဍာန်အရည်အသွေး။ဆီလီကွန်ထုတ်လုပ်သူများမှထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးသည်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါသည်။လက်ရှိတွင်၊ ထုတ်ကုန်အများအပြားသည် အစောပိုင်းအဆင့်တွင်မှို၏ လုပ်ငန်းစဉ်တွင်သာ ပြုလုပ်ကြသည်။မှိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ထုတ်လုပ်မှု ချို့ယွင်းမှုဖြစ်စဉ်အတွင်း ထုတ်ကုန်၏ ခွဲထွက်မျဉ်းနှင့် မျက်နှာပြင်အသွင်အပြင်ကို ထိန်းချုပ်ရန်မှာလည်း မဖြစ်နိုင်ပေ။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ထုတ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း ထုတ်ကုန်၏ vulcanization အချိန်နှင့် လည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် ထုတ်ကုန်အတွင်းရှိ မတူညီသော အရည်အသွေးပြဿနာများကို ဖြစ်စေနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
3. ဘေးကင်းရေး။ထုတ်ကုန်၏ ဘေးကင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကောက်ချက်ချချက်များကို ဒုတိယ vulcanization ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ဒုတိယ vulcanization သည် silica gel ပစ္စည်း၏ အတွင်းပိုင်း အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုကို ဖယ်ရှားပေးသည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် bisphenol A နှင့် phthalates များ လုံးဝကင်းစင်ပြီး ၎င်းသည် လူ့အရေပြားနှင့် လုံး၀ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။အစားအသောက်အဆင့်ရှိ ဆီလီကာဂျယ်နှင့် ထိတွေ့မှုတိုင်းသည် ဆင့်ပွား vulcanization လိုအပ်သည်။သင်ဝယ်သော ဆီလီကွန်ဇွန်းသည် ဒုတိယ ချို့ယွင်းချက်မပြုလုပ်ပါက၊ ထုတ်ကုန်သည် FDA နှင့် LFGB ကဲ့သို့သော ပို့ကုန်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များနှင့် ပြည့်မီမည်မဟုတ်ပါ။
4. အစားအသောက်အဆင့်နှင့် သာမန်အဆင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း။ဆီလီကာဂျယ်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းသည် အမှန်တကယ်ပင် ရိုးရှင်းပါသည်။ထုတ်ကုန်သည် စစ်မှန်သော ဆီလီကာဂျယ်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ဟုတ်မဟုတ်ကို အဖွင့်မီးဖြင့် လောင်ကျွမ်းစေခြင်းဖြင့် ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။မီးခိုးဖြူဖြင့် လောင်ကျွမ်းပြီးနောက် အကြွင်းအကျန်များသည် အဖြူရောင်နှင့် မီးခိုးရောင်ဖြစ်သည်။၎င်းသည် ဆီလီကာဂျယ်နှင့် သက်ဆိုင်ပြီး အစားအစာအဆင့်နှင့် သာမန် ဆီလီကာဂျယ်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ဆန့်ထုတ်သည့်အပိုင်းသည် ဖြူစင်ပြီး မှိုတက်ခြင်းရှိမရှိ သိရှိနိုင်ရန် ထုတ်ကုန်ကို တိုက်ရိုက်ဆန့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။အဖြူရောင်ဖြစ်လျှင် ထုတ်ကုန်သည် သာမန်ကော်များဖြစ်သည်။အနည်းငယ်ဖြူနေပါက၊ ထုတ်ကုန်ကို သာမန်ကော်နှင့် ဓာတ်ငွေ့အဆင့်ဖြင့် ပေါင်းထည့်သည်။ကော်ကို တစ်ချိန်တည်းတွင် လောင်ကျွမ်းစေပါသည်။အသားဖြူခြင်းဖြစ်စဉ်မရှိပါက၊ ထုတ်ကုန်သည် gas-phase food-grade silica gel ဖြစ်သည်။
5. အရောင်းအပြီးအာမခံ၊ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းက ပိုအရေးကြီးတယ်။ပစ္စည်းအပြင်၊ အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ထုတ်ကုန်၏ တည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် ထုတ်ကုန်၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် ကွဲပြားမည်ဖြစ်သည်။လက်ရှိတွင် ဆီလီကွန်ဇွန်းများစွာကို ဆီလီကွန်စစ်စစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။Sub-bonding molding နှင့် assembly molding ။ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းပုံများသည်ထုတ်ကုန်၏အသက်တာအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ဝယ်ယူသည့်အခါ တတ်နိုင်သမျှ one-piece molding ကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။နောက်ဆက်တွဲအသုံးပြုမှုတွင် ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရန် ဆီလီကွန်ဇွန်းကို ဆင့်ပွားချည်နှောင်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ပုံသွင်းခြင်း မရှိပါ။ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကလေး၏ အသက်အရွယ်နှင့် အသုံးပြုမှုအလေ့အထများအတိုင်း ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။